Zimbabwe Yoremekedza Vanhu Vakawanda Musi weHeroes Day
Zimbabwean playwright Stephen Chifunyise
Hurumende nhasi yaburitsa mazita evanhu vachapihwa ruremekedzo nemibayiro yehushingi mukuita basa rakakanaka.
Izvi zvichaitwa musi weHeroes Day.
Aka ndekekutanga kuti hurumende ipe rukudzo nemibayiro kuvanhu vasiri muchiuto.
Mazita aburitswa mugwaro rehurumende anosanganisira evanhu vakafa nevapenyu.
Vacharemekedzwa musi uyu vanosanganisira mudzimai wemutungamiri wenyika, Amai Auxilia Mnangagwa, gurukota rezvemitambo, Doctor Kirsty Coventry naArchibishop Ezekiel Guti, avo vachapihwa ruremekedzo rweOrder of the Star of Zimbabwe Gold.
Vana muzvinafundo vanosanganisira vashakabvu VaWalter Kamba vaive mukuru weUniversvity of Zimbabwe, naVaPhineas Makhurane vaive mukuru weNational University of Science and Technology namushakabvu Primrose Kurasha vaive mukuru weZimbabwe Open University, Professor Hope Sadza and Professor Christopher Chetsanga, avo vachapihwa ruremekedzo rweOrder of the Star of Zimbabwe Silver.
Vanyori vemabhuku nemitambo vanosanganisira mushakabvu Charles Mungoshi, Pathisa Nyathi naDavid Guy namushakabvu Stephen Chifunyise vachapiwa mubairo weCommendation Award.
Mutori wenhau weZimbabwe Broadcasting Corporation, Rueben Barwe, aive mutori wenhau weZBC akashaya, Judith Makwanya nemumwe mutori wenhau ari kuAmerica, Tawanda Kanhema, vachapihwa ruremekedzo rweOrder of the Great Zimbabwe Diamond.
Munyori mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika, VaMark Grey Marongwe, pamwe nevaimbove mabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General, VaTobaiwa Mudede, ndevamwe vevachapihwa rumemekedzo rwePublic Service Long Service.
Vachawana mubairo rweJairos Jiri Award vanosanganisira zvikoro zvepamusoro zvakaita seUniversity of Zimbabwe, Great Ziumbabwe University, Harare Institute of Technology, Africa University nezvimwe.
Vamwe vachapihwa rukudzo vanosanganisiraSekuru Kaguvi, Mbuya Nehanda, Madzishe Chingaira Makoni naMapondera, Mkwati, Queen Lozikeyi Khumalo nevamwe.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vachishanda neMedia Centre, VaEnerst Mudzengi, vaudza Studio7 kuti zvarongwa nehurumende kuremekedza zvizvarwa zvayo zvipenyu nezvakafa zvakanaka chose.
Mumwe mugari wemuHarare, VaOwen Dhliwayo, vatiwo vanofara chose nekupiwa ruremekedzo kwaitwa vanyori vemabhuku nemitambo.
Asi vati havafari nevamwe vari pagwaro raburitswa nehurumende.
Mutungamiri weDemocractic Party, Dr Wurayayi Zembe, vati zvakanaka chose kuti hurumende ipe vanhu menduru asi kuti panofanira kutaurwa mabasa akaitwa nemunhu azoita kuti aremekedzwwe.
VaMudzengi vatiwo pane vamwe vanokodzera kupihwa mibayiro iyi vasina kudomwa mugwaro rehurumende nhasi.
Izvi zvatsinhirwa nemukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development, VaClaris Madhuku, avo vati mutungamiri wenyika anofanira kuva nekomiti yanachipangamazano inomubatsira kutsvaga vanhu vekuremekedza nekupa mibayiro kuitira kuti pasave nekuchema chema munyika sezvinoitika panopihwa vanhu ruremekedzo rwemagamba ehondo.
Vati zvakakosha kuti hurumende iremekedze zvizvarwa zvayo zvinenge zvaratidza hushingi kana kuita mabasa anoyemurwa munyika uye izvi zvinofanirwa kuitwa pachena.